Exynos 9810 अब आधिकारिक छ: सामसु Galaxy ग्यालेक्सी S9 को प्रोसेसर ग्याजेट समाचार
लामो समय पछि यस क्षणको प्रतीक्षा गर्दै, सामसुले अन्ततः २०१ flag को लागि यसको फ्ल्यागशिप प्रोसेसरको सबै विवरण घोषणा गर्‍यो। हामी सन्दर्भ गर्दछौं Exynos 9810 XNUMX १०, प्रोसेसर जुन कम्पनीको नयाँ फ्लगशिपमा जान्छ ग्यालेक्सी S9। कम्पनीले यो नयाँ प्रोसेसरमा आधिकारिक सबै डाटा बनाएको छ।
यसको बारेमा डेटा लीक हुन थालेको केहि महिना भइसक्यो। त्यसैले हामीसँग Exynos 9810 XNUMX१० को बारेमा कुनै न कुनै विचार छ। तर, अब यो प्रोसेसरको बारेमा सबै डाटा ज्ञात छ. हामी नयाँ सैमसंग प्रोसेसरबाट के आशा गर्न सक्दछौं?
कोरियाली कम्पनीले यो दावी गरेको छ प्रोसेसर यसको तेस्रो जेनरेशन सीपीयू को लागी धन्यवाद उपकरणको प्रदर्शन सुधार हुनेछ। थप रूपमा, यससँग एक छिटो गीगाबिट LTE मोडेम र न्युरो नेटवर्कमा आधारित गहन शिक्षा क्षमताहरू छन्। छोटकरीमा, Exynos 9810 XNUMX१० ले धेरै कुराको वाचा गर्छ।
1 Exynos 9810 विशिष्टता
2 जारी मिति
Exynos 9810 विशिष्टता
यो एक छ आठ कोर प्रोसेसर, जसको चार उच्च प्रदर्शन हो। जबकि अन्य चार ऊर्जा क्षमता मा ध्यान केन्द्रित। चार उच्च प्रदर्शन कोर घरको सामसु'sको तेस्रो जेनरेशनको हो। सक्षम हुनेछ २.2,9 गीगा हर्ज घडीको गति प्राप्त गर्नुहोस्। कम्पनीका अनुसार यी कोरहरूको आर्किटेक्चरले पाइपलाइन विस्तार गर्दछ र क्याच सुधार गर्दछ।
यो कारण गर्दछ प्रत्येक कोरको प्रदर्शन अघिल्लो जेनेरेसनको तुलनामा दोब्बर छ। थप रूपमा, यो बहु-कोर प्रदर्शन 40०% बढ्छ। कृत्रिम बुद्धिमत्ताले पनि यो Exynos 9810 मा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ। यो चिपको साथ आउँदछ गहिरो सिक्ने क्षमता न्यूरल नेटवर्कमा आधारित। यो अपेक्षित छ कि सुरक्षा र प्रयोगकर्ता अनुभव यस तरीकाबाट सुधार हुनेछ। थप रूपमा, यसले सुरक्षा कारणका लागि बाँकीबाट छुट्टै प्रोसेसिंग एकाई सुसज्जित गर्दछ।
फोटोग्राफिक पक्ष गहन शिक्षाको एक मुख्य लाभार्थी हुनेछकम्तिमा सामसु .का अनुसार। यो नयाँ प्रोसेसरले व्यक्ति र फोटोग्राफमा वस्तुहरू पहिचान गर्न सक्षम हुनेछ। यसरी, खोज र वर्गीकरण धेरै छिटो र अधिक कुशल हुनेछ। तपाईं तीन आयाममा प्रयोगकर्ता अनुहारहरू पनि स्क्यान गर्न सक्नुहुनेछ।
Exynos 9810 एक शामिल छ Cat.18 LTE मोडेम, त्यो पुग्छ १.२ जीबीपीएस डाउनलोड गति र २०० एमबीपीएस अपलोड गति। थप रूपमा, यससँग 4X4 MIMO, 256-QAM र eLAA प्रविधि जस्ता योजनाहरूको लागि समर्थन छ। यो पनि प्रकट गरिएको छ कि यसले एक समर्पित छवि प्रसंस्करण इकाई समावेश गर्दछ, जुन बहु-ढाँचा कोडेक (MFC) को अपडेटको साथ हुनेछ। यसले उत्तम छवि र भिडियो स्थिरीकरणमा मद्दत गर्दछ।
सामसुले टिप्पणी गरेको छ कि Exynos 9810 XNUMX१० पहिले नै जन उत्पादन चरणमा छ। यो धेरै चाँडै मार्केट मा लाग्छ। थप रूपमा, यो आधिकारिक रूपमा प्रस्तुत गरिनेछ लस भेगासमा CES २०१। यो घटना जनवरी to देखि १२ सम्म आयोजित गरिएको छ। त्यसोभए एक हप्तामा तपाईं यो नयाँ प्रोसेसर चिन्न सक्नुहुनेछ।
लेखको पूर्ण मार्ग: ग्याजेट समाचार » सामान्य » हाम्रो बारेमा » सामसुले गैलेक्सी S9810 को प्रोसेसर Exynos9को डेटा प्रकट गर्दछ